Nosy Sainte Marie : ny 8 ka hatramin’ny 16 jolay ny « Festival des baleines » | NewsMada
Nosy Sainte Marie : ny 8 ka hatramin’ny 16 jolay ny « Festival des baleines »
Anisan’ny mampalaza an’i Madagasikara aty amin’ny faritry ny Ranomasina Indiana sy maneran-tany ny « Festival des baleines », tontosaina ao amin’ny Nosy Sainte Marie. Voakasika ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fizahantany, ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena.
Fantatra fa ny 8 jolay ka hatramin’ny 16 jolay izao no hanatanterahina ny « Festival des baleines 2017 », any amin’ny Nosy Sainte Marie. Hitana ny anjara toerana lehibe amin’izany ny fizahantany. Efa vonona ny amin’izay fandraisana olona marobe izay rahateo ny fotodrafitrasa any an-toerana. Toraka izany koa ny fikarakarana rehetra mifandraika amin’izany, toy ny fitaterana (bus-bateu) ny « hébergement ½ pension » miampy « pass festival », sns. Miara-miasa amina sampandraharaha sy orinasa maro samihafa rahateo ny mpikarakara ity hetsika goavana ity. Anisan’ireny ny BFV-SG sy ny Ultima Media.
Eo amin’ny fanatanjahantena, hisy ny fifaninanana « soccer », ny « trail des baleines » hahatratra 45 km, ny 8 jolay raha 10 km ny 16 jolay. Hazakazaka VTT amin’ny lalana 45 km ny 12 jolay. Fifaninanana hazakazaka lakana ny 11 sy 12 ary 13 jolay.
Hitana toerana lehibe koa ny kolontsaina sy ny fanentanana samihafa. Anisan’ireny ny filatroana roa lehibe izay hifantoka amin’ny lohahevitra mampiavaka ny isam-paritra eto Madagasikara. Varotra sy fampirantiana haneho ny maha manan-karena ny asa tanana malagasy. Fampisehoana an-tsehatra ahitana ny « soirée spéciale» ny 14 jolay, arahina fifaninanana « Miss ». Ny « Cinémada », handefasana sarimihetsika sy hanatanterahana velakevitra. Toy ny fanao isan-taona, hisy hatrany ny fijerena ny fivoahan’ny trozona ao anatin’ny adiny roa farafahakeliny.
Tafiditra ao anatin’ny fanatontosana ny « Festival des baleines » rahateo ny fikajiana sy ny fiarovana ity biby an-dranomasina goavana be ity.